Umenzi wase China MDF / HDF kunye noMthengisi | Roc
I-ROCPLEX Medium Density Fibreboard (MDF) linqanaba eliphezulu, izinto ezidityanisiweyo ezenza ngcono kunokhuni oluqinileyo kwizicelo ezininzi. Yenziwe ngemicu yeenkuni kunye nentlaka, Ubungakanani obuPhakathi beFiberboard, eyaziwa ngokuba yi-MDF, ngumatshini owomileyo kwaye ucinezelwe ukuvelisa amashiti azinzileyo, azinzileyo.
I-ROCPLEX MDF (Medium Density Fiberboard) izinzile ngakumbi kunomthi oqinileyo kwaye ime ngcono kutshintsho ukufuma kunye nobushushu. Iibhodi ezomeleleyo zomthi ziya kuthi ngokwesiqhelo zande kwaye zingene ngokuthe tye kwaye ngokuthe nkqo xa kufuma ubushushu kunye nobushushu. Ngenxa yoku, iikhabhathi, iingcango kunye neepaneli ezenziwe ngomthi oqinileyo zifuna inqanaba eliphezulu lokugcina kunye nokhathalelo.
Sinikezela ngeemveliso ezahlukeneyo zeMDF (Medium Density Fiberboard) zeemveliso ukulungiselela nasiphi na isicelo nasiphi na isicelo.
Indawo yokugcina impahla engamawaka angama-40,000 yokuhambisa nangaliphi na ixesha
Iinkcukacha zeROCPLEX MDF
Ubuso / Umva: Raw MDF Melamine MDF yokwenene MDF HPL MDF
IBakala: Ibanga le-AA
Umbala: umbala we-MDF okrwada, imibala eqinileyo, imibala yeenkozo zomthi, imibala entle, imibala yelitye
Glue: Iglu ye-E0, iglu ye-E1, iglu ye-E2, iglu ye-WBP, iglu ye-MR
Ubukhulu: 1-28mm (eqhelekileyo: 3mm, 6mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm)
Ingcaciso: 1220mmX2440mm, 1250mmX2500mm, 915mmX1830mm, 610mmX2440mm, 610mmX2500mm
Umxholo wokufuma: ngezantsi kwe-8%
Ubunzima: 660/700/720/740/840/120000 kg / m3
ROCPLEX MDF Inzuzo
Iibhodi ze-ROCPLEX MDF
1.) Amandla aphezulu, ukuqina, uzinzo kwaye akukho lula ukukhubazeka.
2.) Ubume bemveliso, ukhuselo lobume bendalo kunye nokukhutshwa okuphantsi kwe-formaldehyde.
3.) Easy ukuba machining, kunye ubambe isikhonkwane olomeleleyo.
Ukubumba okungafaniyo kunye nokuxinana.
5.) Iipropati ze-acoustic eziphezulu kunye ne-thermal insulation.
6.) Ithuba lokufaka izicelo ezahlukeneyo.
Ukupakisha kwe-ROCPLEX MDF kunye nokuLayishwa
Iibhodi ze-ROCPLEX MDF zikulungele ukuqhubekeka koomatshini bokugaya kuba baneempawu ezifanayo zoomatshini.
Amandla kunye nokuqina.
Iiphaneli ze-ROCPLEX MDF ngamandla aphezulu, zigcina imilo yazo kakuhle, zigcinwa zikhuselekile.
Umphezulu uthe tyaba ngakumbi. I-MDF ivumela ipeyinti ekumgangatho ophezulu, i-lamination, i-tape stickers, i-veneer kunye nezinye iingubo.
Iibhodi ze-MDF ze-ROCPLEX eziluhlaza ziyamelana nefungi ezahlukeneyo kunye nezinto ezincinci, ezenza iimveliso ezivela kwi-MDF zicoceke kwaye zikhuseleke ekhaya.
Isicelo seROCPLEX MDF
■ Ukuveliswa kwefanitshala, ukuhombisa, ikhawuntara, itafile yeofisi.
■ Ukusetyenziswa konikezelo.
■ ukukrola, isikrini, isilingi, ukwahlula (udonga, ibhodi) njl.
ROCPLEX MDF Isishwankathelo sokwakha
Ngenxa yokufumaneka kwezinto kunye namandla okusila, i-ROCPLEX inokunikezelwa kwiinkcukacha ezahlukeneyo kwimimandla ethile. Nceda uqhagamshelane nommeli wakho wasekhaya ukuze uqinisekise ngemveliso enikezela kwindawo yakho.
Ngeli xesha nathi sinokukunika iplanga yokupakisha, iplanga le-LVL, njl.
Senso ngokukodwa ngobungcali ekuboneleleni ngamaplanga orhwebo ngo-18mm kunye enkulu.
Ubungakanani benyanga nganye kwiNtengiso ye-Mid-mpuma, kwimakethi yaseRussia, kwimarike esembindini yaseAsia rhoqo ngenyanga.
Nceda unxibelelane neqela lethu lokuthengisa ngolwazi oluthe kratya malunga neemveliso zeshayina MDF.
Egqithileyo LVL / LVB
Okulandelayo: IBhodi Melamine